Dagaallo dhex-maray ciidamada dowladda Somalia iyo Al-Shabaab | Aftahan News
Dagaallo dhex-maray ciidamada dowladda Somalia iyo Al-Shabaab
Muqdisho (Aftahannews)- Wararka ka imanaya Gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay degaanka Xaaji Cali oo hoos taga degmada Cadalle.
Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay soo weerareen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo tuulada Xaaji Cali.
Dagaalka oo xalay saq dhexe bilaabmay ayaa lagu soo waramaya in uu socday in ka badan hal Saac
Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa waxaa dagaalka dhankooda ku wehlinayay maleeshiyo degaanka oo iskood isu abaabulay, si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Dhinaca kalena, ugu yaraan hal askari iyo afar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dhimatay weerar ay maleeshiyaadka Al-Shabaab xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ee magaalada Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Dadka degaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada dawladda ay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab. Waxaa la sheegayaa inuu jiro dhaawac soo gaadhay askarta dawladda.